Nhau - Ndezvipi zvakanakira zveRFID warehouse management system?
Ndezvipi zvakanakira RFID warehouse management system?
Nekudaro, iyo iripo chaiyo mamiriro emutengo wakakwira uye yakaderera kushanda muwarehouse link, kuburikidza nekuferefetwa kwevatatu-party Logistics warehouse operators, makambani efekitori anochengetera zvinhu uye vamwe vashandisi veimba yekuchengetera zvinhu, zvinoonekwa kuti zvechinyakare manejimendi manejimendi ane anotevera matambudziko:
1. Zvinhu zvave kuda kuiswa muimba yekuchengetera zvinhu, uye risiti yeimba yekuchengetera haisati yatumirwa, saka haigoni kuiswa mubasa pakarepo.
2. Motokari yekutakura yave isiripo kwenguva yakareba. Mushure mekutarisa zvinyorwa, zvinowanikwa kuti zvinhu hazvisati zviri mudura.
3. Zvinhu zvakaiswa mukuchengetedza, asi zvakakanganwa kurekodha nzvimbo yekuchengetedza kana nzvimbo yakashata yekuchengetedza yakanyorwa, uye zvinotora imwe hafu yezuva kuti uwane zvinhu.
4. Pavanenge vachibva muimba yekuchengetera, vashandi vanofanira kumhanya vachidzoka nekudzoka mumatura akawanda kuti vatore zvinhu, uye nguva yekumirira yemotokari yakareba.
5. Indiro inongova mazuva mashomanana, saka kushanda kwacho kwakaderera, uye kushanda kwakaderera, uye pane zvikanganiso zvinowanzoitika.
6. Nhamba yakawanda yezvigadzirwa zvenguva yemberi iri pedyo inogona kuverengwa nguva imwe neimwe iyo inventory inotorwa, uye yekutanga-mukati, yekutanga-kunze yakave hurukuro isina chinhu.
Kuvepo kwematambudziko emudura repamusoro kwave nemhedzisiro yakaipa mukusimudzira nekushanda kwebhizinesi, uye zvinodikanwa kugadzirisa nekukurumidza nekuvandudza nhanho yekutarisira nzvimbo. Kubuda kweRFID warehouse manejimendi system inopa mabhizinesi ane nyore, anoshanda uye akangwara ekuchengetedza chengetedzo maitiro.
Saka, kutarisana nematambudziko epamusoro ekuchengetedza, ndeapi mabhenefiti eRFID warehouse management system?
Nekupa RFID electronic tags kune imwe neimwe pallet uye nzvimbo yekuchengetera mudura, uye neyakasiyana siyana michina, inogona kuona otomatiki kuzivikanwa kwepallet uye ruzivo rwekuchengetedza zvinhu, izvo zvinogonesa mushandisi kubata zvinhu zvekutengesa.
Panguva imwecheteyo, kuburikidza neUHF RFID tag inosunga kune zvinhu, inogona kunyatsosiyanisa matambudziko ekutonga akadai sebatch, modhi, zita rechigadzirwa, nguva yekuchengetera zvinhu, mutengesi, chimiro, nezvimwewo, uye manejimendi uye kutonga kunoenderana nezvinodiwa zvemazuva ano zvekutonga.
Mabasa emazuva ese ekugamuchira anogona kuwiriraniswa otomatiki kune RFID inobatwa ruoko, uye iwe unogona kuziva ruzivo rwebasa pasina mapepa emarisiti.
Iyo data yekugamuchira haidi kurekodhwa nemaoko, uye sisitimu inounganidza otomatiki uye inoverengera kuti ive nechokwadi chechokwadi che data rekugamuchira.
Mushure mekunge zvinhu zvasvika mudura, sisitimu inozogadzirisa otomatiki huwandu hwezvinhu mudura, uye magwaro anozopedzwawo.
Mushure me RFID warehouse management system inosanganiswa neRFID forklift, mabasa esherufu anogona kupihwa kuRFID forklift kuti aurawe.
Iyo RFID forklift inoongorora otomatiki pallet, inoratidza ruzivo rwekutakura zvinhu uye ruzivo rwekuchengetedza, inoendesa nzvimbo yekuchengetera zvinhu munguva chaiyo, uye inowedzera hesiti pasherufu.
Iyo sisitimu inozogadzirisa yega nzira yekufamba, hapana chikonzero chekufamba nekudzoka, kufamba kumwe chete kuti upedze kutora zvinhu.
RFID forklifts scanner RFID pallet tag kuti ikurumidze kuona ruzivo rwezvinhu zvinobuda, uye inogona kuita yekutanga-mu-yekutanga-kunze ongororo yekuvandudza inventory kuchinja.
Mushure mekunge iyo yekubuda yapera, iyo inobuda inventory inodzikiswa otomatiki.
Iko hakuna kudikanwa kwemaresiti ezvinyorwa zvemapepa, uye iyo RFID nhare yebasa chikuva inogona kutarisa pasina waya masisitimu ehurongwa pamhepo.
Iko hakuna chikonzero chekurekodha nemaoko ruzivo rwe data data, uye iyo system inotsigira pane-saiti marekodhi ekushanda.
Iko kurongeka kwekuverenga kunosvika padanho renzvimbo uye pallet level, zvichiita kuti inventory ive nyore kuita uye kuita; tsigira iyo hesera uye imba yekuchengetera mukati nekunze bhizinesi panguva imwe chete.
Yakasanganiswa nekushandiswa kweRFID forklifts, kukurumidza kwekuverenga kuri kukurumidza, uye data yemusiyano weiyo inongopfupikiswa.
Iko kushandiswa kweRFID warehouse management system inorerutsa zvakanyanya mashandiro ezuva nezuva eimba yekuchengetera zvinhu, uye data rinobva raunganidzwa uye kuvandudzwa, kubvisa kudiwa kwekupinda nemaoko, nekudaro kugadzira yakangwara uye yakazvimiririra nzvimbo yekuchengetera bhizinesi kudzikisa mutengo uye kuwedzera kushanda. .
Nguva yekutumira: Zvita-31-2021